Chọpụta ihe ị ga-ahụ na Wales, United Kingdom | Bezzia
Ihe ị ga-ahụ na Wales, United Kingdom
Susana Garcia | 24/03/2021 10:00 | si ebi ndụ, njem
Wales bụ akụkụ nke United Kingdom ọ bụkwa otu n’ime akụkụ ndị kachasị mma anyị nwere ike ịhụ. Ga njem site na mpaghara ndịda a bụ ihe na-adọrọ mmasị, ebe ọ bụ na anyị na-ahụ ihu ala dị ịtụnanya na obodo ndị mara mma. A maara ya maka ịbụ ala nwere ọtụtụ ogige, ebe ọ bụ mpaghara echedoro nke ukwuu, mana yana obere obodo na ọmarịcha mma na ọdịdị ga-ewepụ ume anyị.
Kpamkpam kwesịrị ya tụlee njem na mpaghara Wales, ebe ọ bụ na anyị ga-ahụ mpaghara a n'anya. Otu n'ime mba pere mpe na United Kingdom mana nke ahụ enweghị ihe ga-emere ndị ọzọ anyaụfụ. Anyị ga-ahụ ụfọdụ ndị isi ebe ileta na Wales.
1 Cardiff, isi obodo
2 Swansea, obodo ya nke abụọ
3 Conwy, obodo mara mma
4 Ogige Ntụrụndụ Snowdonia
5 Llandudno, kporie ndụ ụdị Victorian
Cardiff, isi obodo
Cardiff bu isi obodo Wales ma ya mere gha gha hu. Ọ pụtara ìhè maka ụlọ ya nke malitere na mgbe ọchịchị Rome n'agbanyeghị na ọ mejuola ọtụtụ mmezi na ndọtị n'akụkọ ihe mere eme. Agaghị agbaghara bụ locklọ Nche Clock na Mgbasa Animal. Ọzọ anyị nwere ike ịga na Castillo agbata obi, nke bụ mpaghara azụmahịa ya na mpaghara ya. Ọzọkwa kwesịrị ịhụ bụ mara mma Bute Park, otu n'ime UK kasị ukwuu obodo ogige ntụrụndụ, nsogbu ndị dị n'akụkụ Osimiri Taff. Gaa na veranda ochie mara mma Royal Arcade, ebe ịchọta ihe ncheta na ihe mgbe ochie. Ọ na-aga n'ihu na nleta na Central Market iji hụ ngwaahịa ndị a na-ahụkarị na Museum Museum.
Swansea, obodo ya nke abụọ
Nke a bụ obodo nke abụọ kachasị ukwuu na nke kachasị mkpa na Wales, na-eme ya ebe ọzọ ịga leta. Emegharịrị ebe etiti ya mgbe Agha thewa nke Abụọ gasịrị site na bọmbụ. Nwere ike ịhụ Castle Square ma gaa Oxford Street, ebe azụmahịa ya. Ọ na-egosiputa nnukwu ahịa ya, yana ngwaahịa gastronomic kacha mma nke Wales. N'ebe a, ị ga-enyocha osimiri mara mma ma gafere Mumbles Lighthouse, ụlọ ọkụ ya a ma ama.
Conwy, obodo mara mma
Na Wales anyị nwere ọmarịcha obere obodo ndị mara mma, dị ka Conwy na North Wales. Obodo a nke nwere mgbidi nke ekwuputala na ya bu World Heritage Site. Ọ pụtara maka nnukwu ụlọ narị afọ nke iri na atọ nke ahụ doro anya ga-adọta uche anyị ma nke ahụ ka na-echekwa akụkụ nke mgbidi ya. N'ime obodo ị nwere ike ịhụ ụlọ Plas Mawr nke nwere ọmarịcha ụlọ Elizabethan. Anyị nwekwara ike ịga leta obere ọmarịcha ụlọ na Great Britain na mpaghara ọdụ ụgbọ mmiri, nke mara ezigbo mma.
Ogige Ntụrụndụ Snowdonia
Ebe a mara mma nke mba dị na Northwest Wales juputara n’ugwu, ndagwurugwu, ọdọ mmiri na ọdọ mmiri. Ebe ọ bụghị naanị ihe ijuanya ma ọ bụrụ na anyị gafere ya, mana ọ bụkwa paradaịs maka ndị chọrọ ịga njem n'etiti etiti okike. N’ogige a bụ Ugwu Snowdon, nke kachasị elu na England, yana ugwu ndị ọzọ dị larịị nke dị mma maka ndị mbido n’elu ugwu. Dabere na akụkọ mgbe ochie, n’elu ugwu ahụ bụ ogre Ritha Gawr, onye Eze Arthur gburu.
Llandudno, kporie ndụ ụdị Victorian
Nke a bụ ihe ọzọ nke maa mma obodo nke North Wales, a ebe na-na-a oké ezumike ebe ke United Kingdom. E nwere nnukwu tram na-arịgo n’elu obodo ahụ. Bụ ebe njem nleta dị otú ahụ anyị maara na anyị ga-ahụ ụdị ọrụ ọ bụla, site na ụlọ ahịa gaa n'ụlọ nri, họtel na ụlọ ahịa. Edere maka njem mara mma ya, kamakwa maka ụlọ ndị Victorian. Ọzọkwa, o doro anya na ọ bụ ebe a ka Lewis Carroll zutere obere onye London onye kpaliri mmụọ ya ịmepụta 'Alice na Wonderland'.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » si ebi ndụ » Ihe ị ga-ahụ na Wales, United Kingdom
Anyanwụ ude tupu ma ọ bụ mgbe moisturizing
Gịnị bụ ọrịa Houdini?